Beesha caalamka oo ku baaqday joojinta mooshinka - BBC News Somali
Beesha caalamka oo ku baaqday joojinta mooshinka
20 Agoosto 2015
Image caption Mooshinkan ka dhanka ah madaxweynaha waxaa gudbiyay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka
Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen beesha caalamka ayaa lagu dalbaday in sidegdeg ah loo xalliyo xasaradda ka dhalatay mooshinka laga keenay Madaxweynaha Soomaaliya Mudane xasan Sheekh Maxamud.
Bayaankan oo si wadajir ah ay u soo saareen, Qaramada midoobeey, AMISOM, IGAD, midowga Yurub, Mareykanka iyo Britain, ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin mooshinka Baarlamaanka loo gudbiyay ee lagu doonayo in xilka looga qaado madaxweynaha.
Waxa ay sheegeen in arrintaasi ay carqalad ku tahay hormarka Soomaaliya sida nabadda iyo dhismaha dowladda.
“Inkastoo aan si buuxda u qadarinayno xaqa uu Baarlamaanka Federaalku u leeyahay inuu la xisaabtamo hay’adaha sidaana ku guto waajibaadkiisa dastuuriga ah, gudbinta mooshin caynkan oo kale ah waxay u baahantahay daahfurnaan aad u heer sarreysa iyo hunaanta hanaanka loo marayo, waxayna qaadan doontaa waqti aad qaali u ah, gaar ahaan marka ay meesha ka maqanyihiin hay’ado sharci oo lagama maarmaan ah”, ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan.
Bayaankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo baarlamaanka Soomaaliya loo gudbiyay mooshin ka dhan ah madaxweynaha oo xildhibaanada qaar ay ku doonayaan in Mr Xasan Sheekh xilka laga qaado.
Beesha caalamku waxa ay sheegeysaa inay si joogto ah ugu ololeynayaan xasillooni siyaasadeed oo ka hana qaadda Soomaaliya si loo ixtiraamo shaqooyiinka hay’adaha kala duwan ay leeyihiin.
Waxa ay tilmaameen inay garab siinayaan in tallaabooyiin xoog leh laga qaado arrimaha musuqmaasuqa, dhaqaalahana lagu hormariyo dhinacyada amniga iyo difaaca.
“Waxaa naga go’an inaan dadka Soomaaliyeed ku kaalmeyno isu diyaarinta geeddi socod doorashada ee dhacda sannadka 2016 oo aan hay’ad keligeed ama cid kale oo ay arrintu khuseyso ku amartaagleyneynin,” ayey bayaankan ku sheegeen beesha caalamka.
Waxayna intaasi ku dareen “Hanaanka doorasho ee dhab ahaan loo dooran doono waxaa isla qaadan doona dadka Soomaaliyeed ka dib maka la maro hanaan wadatashi, ee ay ka wada qaybqaataan laamaha fulinta, sharcidejinta iyo maamul goboleedyada iyo weliba bulshada rayidka dalkoo idil,”.